တစ် ဦး "အဆောက်အ ဦး" နှင့် "ဖွဲ့စည်းပုံ" အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ? | လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
တစ် ဦး "အဆောက်အ ဦး" နှင့် "ဖွဲ့စည်းပုံ" အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ?
အဆောက်အ ဦး သည်လူများ၏ဘ ၀ သို့မဟုတ်အလုပ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်မူကြို၊ ကျောင်း၊ လူနေအိမ်၊ တက္ကသိုလ်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်တူညီသောအဆောက်အ ဦး ဖြစ်သော်လည်းကိုးကားရန်သာရည်ရွယ်သည်။ nm ကလူ၌။
အဆောက်အ ဦး ဥပမာများ။
ဥပမာဒီပုံတွင်ဖော်ပြထားသောအရာ - အမြင့်ငါးဆယ်အမြင့် ၅၀ ရှိသောကြီးမားသောသစ်ပင်များသည်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပြီး၎င်းမှာသစ်ပင်များဖြစ်ပြီးစင်ကာပူတွင်တည်ရှိသည်။ စီမံကိန်းအရဤကုမ္ပဏီကြီးများ၏သရဖူများအောက်တွင်လူကူးတံတားများအတွက်တံတားများကိုsurelyကန်အမှန်ဆိုင်းငံ့ထားမည်။
အဆောက်အ ဦး များတွင်လူနေအိမ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဆောက်အ ဦး များပါ ၀ င်သည်။ ဤရွေ့ကားအဆောက်အ ဦး များခေါင်မိုး, နံရံများရှိသည်။ လူတစ် ဦး လိုအပ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ ဥပမာ - ကျောင်းအဆောက်အအုံ၊ စာကြည့်တိုက်၊ စားသောက်ဆိုင်
ဆောက်လုပ်ရေးဆိုတာကကျဉ်းမြောင်းတဲ့အယူအဆဖြစ်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းကိုဆိုလိုတာ။ အချို့ကိရိယာများပါ ၀ င်သောဖွဲ့စည်းပုံသည်၎င်းတို့နှင့် တွဲဖက်၍ အချို့အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အဆောက်အ ဦ များတွင်တံတားများ၊ ရေကာတာများ၊ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ တီဗွီတာဝါ၊ အားကစားကွင်း၊ ရေခဲကွင်းများပါဝင်သည်။ အဆောက်အ ဦး ကိုယ်နှိုက်သည်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမှလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအလုပ်လုပ်သောလူများအပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။
ဒီအဆောက်အ ဦး ကငါနေတဲ့ငါ့အိမ်ပဲ။ ငါလေ့လာသည့်ကျောင်း။ ငါရှိရာရုံး၊ နေ့လည်စာစားသောကဖေးသို့မဟုတ်အနားယူသည့်ကလပ်။ နေကလက်နက်ချသည်။ သို့သော်ဤအဆောက်အ ဦး များသို့ရောက်ရန်သင်တစ်ခါတစ်ရံဖြတ်ကူးရသောတံတားများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများမှာအဆောက်အအုံများရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ကရင်မလင်, ငါနားလည်သကဲ့သို့, ensemble ။ ကရင်မလင်၏နံရံ - အဆောက်အ ဦး၊ ထို့နောက်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများသည်အဘယ်အရာနှင့်သက်ဆိုင်သနည်း။
အဆောက်အ ဦး များနှင့်အဆောက်အအုံများသည်ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်၎င်းတို့တွင်လူများ၏တည်ရှိမှုအဆင့်နှင့်ကွာခြားသည်။
အဆောက်အအုံများသည်များသောအားဖြင့်နေရာများစွာရှိသည်။ ဤတွင်နေထိုင်သူများ (လူနေအိမ်အဆောက်အ ဦး များ)၊ အလုပ် (အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများ)၊ လေ့လာခြင်း (ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်)၊ ကုန်ပစ္စည်းများ (စတိုးဆိုင်၊ အပန်းဖြေစခန်း (ပြဇာတ်ရုံ၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ စသည်) ။
အဆောက်အအုံများသည်အဓိကအားဖြင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရန်ရည်ရွယ်သည် (တံတားများ၊ ဆည်များ၊ ဆည်များ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့ဆောင်ရေးမျှော်စင်များ၊ ရေတာဝါတိုင်များ) ။ အဲဒီမှာလူတွေ, သူတို့ဖြစ်လျှင်, ယာယီဖြစ်ကြသည်။
အမှန်တရားနှင့်ဤစည်းမျဉ်းမှအချို့သွေဖည်ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်အားကစားရုံတစ်ခုသည်အားကစားရုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးအားကစားသမားများနှင့်ပရိသတ်များစွာရှိသော်လည်း ရုပ်မြင်သံကြားတာဝါတိုင်အနည်းငယ်သာရှိသောနည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများရှိသည့်တိုင်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆောက်အ ဦး များသည်အတွင်းရှိအဆောက်အအုံများတည်ရှိသည်ဟုယူဆပြီး၎င်းတို့သည်နေထိုင်ရန်၊ လေ့လာရန်သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်လူ (အိမ်များ၊ နွေရာသီအိမ်တွင်းအိမ်များ၊ ကျောင်းအဆောက်အ ဦး များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ) အတွက်ရည်ရွယ်သည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတာ ၀ န်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်း (ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ တံတားများ၊ တာဝါတိုင်များစသည်ဖြင့်) ။
အဆောက်အ ဦး ဆိုသည်မှာလူတို့ဖန်တီးပြီးအသုံးပြုသည့်အတွင်းပိုင်းမြေနေရာအကျယ်အဝန်းရှိသောအဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအထား - အခန်းတစ်ခန်း။ အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးတစ်ခုအင်ဂျင်နီယာဆောက်လုပ်ရေးအရာဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အဆောက်အ ဦး တစ်ခုလူနေအိမ်အဆောက်အ ဦး, ရုံးအဆောက်အ ဦ, ပြဇာတ်ရုံ, ဟိုတယ်, ဆပ်ကပ်။ ဆောက်လုပ်ရေးမှာတံတား၊ မဟာ၊ မျှော်စင်၊ အားကစားရုံ၊ ဆည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ထရန်စဖော်မာဓာတ်အားခွဲရုံကိုအဆောက်အအုံများနှင့်အဆောက်အ ဦး များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်ပါသလား။ ဟုတ်လား
ကောင်းပြီ ... ကြည့် အဆိုပါ Ostankino မျှော်စင်အဆောက်အ ဦး မဟုတ်ပါဘူး ... ကဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာကွဲပြားခြားနားသောထိုကဲ့သို့သောထရန်စဖော်မာဓာတ်အားခွဲရုံ - ဒီကိုလည်းဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အ ဦး များသည်အကြမ်းအားဖြင့်အိမ်များ၊ အလုပ်ရုံများစသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ လူနေအိမ်၊ စက်မှု၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားအရာများ။
Posted in, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,282 စက္ကန့်ကျော် Generate ။